Indlela yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Unokubakho njani abalandeli abaninzi kwi-Instagram
Disemba 13, 2018 0 IiCententarios 1069
Ukuba nabalandeli abaninzi kwi-Facebook, kwi-Twitter okanye kwi-Instagram akubalulekanga kuphela, kodwa kukwathetha ukukhuthaza okukhulu. Nangona kunjalo, kuyangqinwa ukuba aba balandeli abangafikeleli kunxibelelwano lwethu lulodwa. Kuya kufuneka senze eyethu indima ukutsala abasebenzisi abatsha abanika ixabiso ngakumbi kwiprofayile yethu. Ngesi sizathu, Kule posi sikuxelela indlela onokubakho ngayo abalandeli abaninzi kwi-Instagram.
Ngokuvula iakhawunti yethu Instagram Siza kuba nabalandeli bethu bokuqala, abahlala bengabahlobo, usapho, abasebenzi kunye, njl. Kodwa kuza inqaku apho ngaphandle kokuthumela umxholo rhoqo, asiphumelelanga ukufaka iakhawunti yabalandeli bethu.
Ukuba ungumsebenzisi wasekhaya, oku akunakubaluleka. Kodwa ukuba unayo i-akhawunti yeshishini, ukubona ukuba inani labalandeli bakho alonyuki kungakhathaza. Nangona kunjalo, kukho inani lezixhobo kunye neendlela esinokuphumeza kuzo tsala abalandeli kwi-Instagram
Ifoto yomfanekiso kunye nenkcazo
Iprofayili kufuneka iphethwe yifoto yobuqu, ecacileyo kunye nenqanaba lomgangatho, okanye uphawu okanye uphawu ukuba liyi-akhawunti yeshishini. Emva kwayo, kubalulekile ukubeka inkcazo emfutshane echaza iakhawunti. Ngokufanelekileyo, sebenzisa amagama aphambili angakuchazi kuphela, kodwa kwangaxeshanye ukwazi ukufumana ingqalelo yabasebenzisi. Njani? yiba nabalandeli abaninzi kwi-Instagram yiya ngeprofayili yokuqaphela.
Faka umxholo womgangatho
I-algorithm ye-Instagram iqinisekisa ukuba ubeka isithombe esemgangathweni ngcono kuneendlela ezintathu ezingacacanga. Ukongeza, kucetyiswa kakhulu ukuba ubhale inkcazo ngezantsi kwefoto, ibinzana elinokunyusa, umnxeba kwisenzo esinemibuzo okanye umeme abahlobo ukuba bafake ithegi, njl. Isicatshulwa esifutshane nesaneleyo sokuqonda intsingiselo yefoto. Kwaye ngoku sikufundisa ukuba Yabelana ngamabali kwi-Instagram.
Ngelixa kuyinyaniso oko kufuneka silayishe imixholo esemgangathweni ukuze sifumane abalandeli kwi-Instagram, musa ukuwela kwisiphoso sokukwenza izihlandlo ezininzi ngosuku. Ukupapashwa okungakumbi esikwenzayo, oku kuya kuba nexabiso elincinci. Cinga nje abo balandeli banezaziso zabo zenziwe rhoqo xa ulayisha umxholo kwi-Instagram. Ukuba sibanelisa ngeefoto ezininzi, banokuyeka ukusilandela.
Ukuze lo mxholo womgangatho ube nokubonakala okukhulu, kubalulekile ukwazi indlela yokusebenzisa ii-hashtag. Abasebenzisi be-Instagram balandela ii-hashtag ezinxulumene nezinto abanomdla kuzo, ke ngokuzisebenzisa kuya kuba lula ukufikelela kubaphulaphuli ababanzi. Nangona kunjalo, sukugcwalisa iifoto zakho ngama-hashtag. I-10 - 12 iya kwanela. Ukwazi ukuba nabalandeli ngakumbi kwi-Instagram, ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona ngcebiso zibalaseleyo.
Esi sicwangciso silungile ukuba abo bangaphambili bayasilela okanye ufuna ukuhamba ngokukhawuleza xa kusiza inani lethu labalandeli. Kwi-intanethi kukho inani elifanelekileyo leenkampani ezibonelela ukuba kunokwenzeka Thenga abalandeli be-Instagram. Nangona kufuneka siqinisekise ukuba ngabasebenzisi ngqa ukuze iinethiwekhi zentlalo zingenako ukusigweba nangayiphi na indlela.
Zonke ezi ndlela zokufumana abalandeli kwi-Instagram zilula kakhulu kwaye kulula ukuzenza. Kuyinyani ukuba asizukuzibona iziphumo kwixesha elifutshane, kodwa kungekudala emva kokuba sizibalile ngendlela efanelekileyo abalandeli bethu baya kukhula ngayo.
1 Ifoto yomfanekiso kunye nenkcazo
2 Faka umxholo womgangatho
5 Thenga abalandeli